3 ngwa ị ga-amata ihu igwe na oge | Netwọk Mgbasa Ozi
3 ngwa ị ga-amata ihu igwe na oge
Sergio Gallego | | Meteorology, Netwọk Mgbasa Ozi
Taa onye ọ bụla nwere ịntanetị ma nwee ama ị nwere ike ịmata ihu igwe nke obodo gị na ezigbo oge yana oke nkenke na izi ezi.
Ọ bụrụ na ị masịrị ihe niile metụtara ihu igwe ma mara mgbe niile ihe ihu igwe dị na mpaghara ị bi, echefula nkowa ma mara nke oma na ngwa 3 ị gha agha ima iji mara ihu igwe di na obodo gi oge obula.
1 Weather n'okpuruala
2 Oti mkpu nke mmiri ozuzo
Ọ bụ ngwa zuru oke ma bụrụ otu nke kachasị mma ebe ọ na-enye ohere ịmara nha oge nke ikuku, mmiri ozuzo ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ. Nwere ike ịmata amụma ihu igwe na oke nkọwa n'ime ụbọchị 10 sochirinụ ka ị nwee ike ịme atụmatụ na-enweghị nsogbu. Wijetị maka mobile dị ezigbo mma ma nwee ọtụtụ nhọrọ iji nwee ọ enjoyụ na ya oge niile.
Oti mkpu nke mmiri ozuzo
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata kpọmkwem mmiri ozuzo amụma na mpaghara ebe i bi, a ngwa n'ihi na android bụ ihe kasị mma na ahịa. Ọ bụ kpam kpam n'efu ma ị nwere ike ịma na ezigbo oge ka mmiri ozuzo n'onwe ya si eto na mba ahụ.
Ọ bụ netwọk nke ọdụ ụgbọ elu nke gbasaa na Spain na Portugal. Stationslọ ọrụ ndị a na-enye ohere ịmara n'oge ozugbo ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, ifufe na ọdịda. Ngwa wijetị na-adọrọ mmasị ma na-egosi ọnọdụ okpomọkụ dị ugbu a n'ụzọ doro anya ma mara mma yana akụkụ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị dịka ikuku, iru mmiri ma ọ bụ ihe ọkụ ọkụ.
Ndị a bụ ngwa 3 gbasara ihu igwe ga-enyere gị aka ịmata ihu igwe dị n’obodo gị n’ụzọ doro anya ma zie ezie. Site ugbu a gaa n’ihu, ị nwere ike ịmata kpọmkwem etu ihu igwe ga-adị n’obodo ọ bụla na Spen n ’ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » 3 ngwa ị ga-amata ihu igwe na oge
Ihe 6 ị nwere ike ime iji lụso mgbanwe ihu igwe ọgụ
Kedu ka ihu igwe dị na Mediterenian